NEI ZVAKAITIKA - Shanghai Fomu Exhibition Service Co Ltd.
NEI KUTI UYE KUTI
2019 FALL RATIDZA PICHA GADZESI
Nyoresa KUTI VONESE
NEI KUTI PANO
DAMBUDZIKO MU SHANGHAI
KUSHAYA UPENYU KUSVIRA KUSVIRA VAMWE VANOTENGESA
RayWhite-Takasangana neshamwari zhinji dzinofarira kuAustralia pachiratidziro ichi. Isu tine chivimbo chizere uye tinotarisira kuzarura matavi uye kupinda East China musika munguva pfupi iri kutevera. Iyi ratidziro inobudirira kwazvo. Vanoronga kuratidzira uku vanofanirwa kurumbidzwa sezvo zvichishamisa.
Keller Williams-Iyo OPI Expo inzvimbo yakasarudzika yemakambani epasi rese ari kutsvaga kupinda mumusika weChina. Zvivakwa zvedu zvakavimbiswa nevazhinji vatengi veChinese vatengi, vachitipa mukana wakakura wemabhizinesi mikana. Tinoda kutenda mrongai nekutibatsira kutia kuita kwedu mukuratidzira kuve kwakabudirira kwazvo.
21 Century-Kutenda kune OPI kuratidza isu takakwanisa kuendesa huwandu hwedu hwakawanda hwebasa rekufambiswa kune boka guru revatengi vanofarira zvivakwa zveChina. Zvichakadaro, takaitawo musangano wakabudirira wevatori venhau uye isu takaramba takagutsikana zvikuru nekusimudzirwa kwakaitwa kubudikidza nechiitiko ichi.
LJ Hooker-Isu takatora chikamu muExpresser Property Immigration Investment Fair kwemakore matatu apfuura. Ichi ndicho chakanakisa kuratidzira chatakambotora chikamu mukati meChina. Kuenzaniswa nezvimwe zviitiko zvatakaenda, kunaka kwemutengi kune zvinangwa zvakasimba kunoonekera kwazvo pano. Isu tinoda kusvika kwenguva refu-kurangana kubatana pamwe nevanoronga muna 2018.
DTZ-Kwemakore apfuura emakore OPI expo yave ichitenderera ichipinda mune yakanyatsokura-yakakura uye inonakidza Investment fair. Izvo zvazove zvakakosha muhurongwa hwepasi rose hweAmerican real estate indasitiri.
RUONESO VENUE MUNYAYA DZAKANAKA YESANGANGI
Wiseve · OPI Shanghai 2018 / Kudonha kuchaitwa mumoyo chaipo peguta reShanghai.
Lujiazui Skyline: Zvinotaridzika muSky Shanghai
Iyo ExPO VENUE IYO YEMADZIMA YEMADZIMA UYE YAKASANGWA, UYE VAKURU VAKURU -ENDA ZVINHU ZVINOGONA.
Nzvimbo yakanaka yekuratidza kune dzimwe nyika zvirongwa kune vechidiki veChina.
Iyo Lujiazui inogara yakatarisana neBund kuEast rutivi rweRwizi rweHuangpu. Yakagadzirirwa sedunhu idzva rezvemari reShanghai kubvira kutanga kwema1990, zvivakwa zvakakurumbira zvakaonekwa mudenga kubva kuBund zvinosanganisira Oriental Pearl Tower, Jin Mao Kuvaka, Shanghai World Financial Center, Super Brand Mall, Shanghai IFC, Bank of China Tower uye iyo Shanghai Shongwe.
YATINotsigirwa NEMUTUNGAMIRI MEDIA & BONESA VANHU
Zvekubvunza nezve zviitiko zvedu, ndapota siya email yako kwatiri uye isu tichave tiri mukati meawa makumi maviri nemana.
Kero: 2727, Riverside Avenue, Pudong New District, Shanghai, China
Runhare: + 86-21-56519765